चोरेकाे भरमा ललितपुरमा घर ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
चोरेकाे भरमा ललितपुरमा घर ?
१८ माघ २०७२, सोमबार ०२:५९
काठमाडौं।चोरी गरेरै रामेछापका केशव खड्काले ललितपुर टीकाथलीमा घर बनाएका छन्। उनले आफ्ना सहयोगी परिचालन गरेर चोरी गर्दै आएका थिए।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ-खड्का समूहले धनी र विदेशीको घर छान्दै चोर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले लामो समयदेखि चोरी गर्दै आएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी पीताम्बर अधिकारीले बताए। सहयोगी कुमार भन्ने रघुनाथ बस्नेतसहित खड्कालाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले शनिबार पक्राउ गरेको छ भने अरू फरार छन्।
पछिल्लोपटक खड्का समूहले सानेपास्थित डा. सन्तोष शाक्यको घरबाट १० लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको धनमाल चोरी गरेको थियो। सोही घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूको दर्जनौँ चोरी खुलेको हो। ६ वटा ठूला चोरी खुलिसकेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको डिएसपी दयानिधि ज्ञवालीले बताए।
उनीहरूले ०६५ देखि चोरी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। १५ मंसिर ०७१ मा झम्सीखेलस्थित रमा केसीको घरबाट पाँच लाख ८६ हजार, एकान्तकुना बस्ने विदेशी नागरिक एमोस स्टोल्जफसको डेराबाट २२ वैशाख ०६६ मा दुई लाख ८० हजार र ३ साउन ०६६ मा दुई लाख ५८ हजारबराबरको धनमाल, २० चैत ०६५ मा सानेपामा विदेशी नागरिक माइबल बेस्टनको घरबाट एक लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको धनमाल चोरी गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रकाशित : १८ माघ २०७२, सोमबार ०२:५९